RASMI: Kooxda Atletico Madrid oo xaqiijisay saxiixa Luis Suarez oo ay kala soo wareegeen Barcelona – Gool FM
Haaruun September 25, 2020
(Madrid) 25 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain ayaa goordhow ku dhawaaqday saxiixa Luis Suarez, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga Barcelona.
Weeraryahankii hore ee kooxda Barcelona Luis Suarez ayaa maanta gaaray garoonka diyaaradaha Madrid ee Barajas Airport ee Magaalada Madrid si uu u dhammaystiro ku biiristiisa kooxda Atletico Madrid.
Xiddiga xulka qaranka Uruguay ayaa saaxiibadiisa kooxda Barcelona macsalaameeyey Khamiistii kaddib markii labada kooxood ay heshiis wada gaareen habeenkii Arbacada, waxaana la sheegay inuu ku faraxsan yahay rajada ah inuu ka hoos ciyaaro tababaraha weyn ee Diego Simeone.
Dhaliyahan Luis Suarez ayaa kaddib markii uu ka gudbay tijaabadii caafimaad ee uu la marsiiyey, waxa ay kooxda Atletico Madrid si rasmi ah u xaqiijisay inuu yahay ciyaaryahan kooxdeeda ah, waxaa ay baraheeda dhinaca xiriirka bulshada ay taageerayaasheeda kula wadaagtay Suarez oo heshiiska cusub qalinka ku duugaya.
Suarez ayaa bedel u noqon doona Alvaro Morata oo ka tagay kooxda Atletico, waxaana xiddiga reer Spain uu u dhaqaaqay Talaadadii naadiga Juventus ee dalka Talyaaniga.
Waxa uu Suarez aadi doonaa xarunta tababarka kooxda, wuxuuna bilaabi doonaa inuu u diyaar garoobo kulanka furitaanka kooxdiisa Atletico ee horyaalka LaLiga Santander, kaasoo gurigooda ay ku soo dhoweynayaa kooxda Granada galabnimada Axadda.
RASMI: Luis Suarez oo ka gudbay tijaabada caafimaad ee uu u maray Kooxda Atletico Madrid... + SAWIRRO